Wadah Khanfar oo iska casilay Agaasimaha Guud ee Al-Jaseera, masuul cusub oo badaley – SBC
Wadah Khanfar oo iska casilay Agaasimaha Guud ee Al-Jaseera, masuul cusub oo badaley
Posted by editor on September 21, 2011 Comments
Wadah Khanfar oo ahaa Agaasimaha guud ee Shabakada Al-Jazeera oo ka kooban Al Jazeera Arabic channel, Al Jazeera English, Al Jazeera Documentary, Al Jazeera Sport, Al Jazeera’s news websites, the Al Jazeera Media Training and Development Center, the Al Jazeera Center for Studies, Al Jazeera Mubasher (Live), and Al Jazeera Mobile ayaa shaaca ka qaaday maalinimadii shaley galinkii dambe in uu iska casilay xilkaasi oo uu hayey mudo 8 sano ah.
Wadah Khanfar "Nabadgalyo Al-Jazeera"
Wadah Khanfar oo ay ku tilmaamtey jariirada The Forbes in uu ka mid yahay dadka aduunka ugu saameynta badan wuxuu ku sheegay iscasilaadiisa inay qayb ka tahay yookii ay hiigsanaysay Al-Jazeera oo ahaa in ay ka mid noqoto warbaahinta aduunka ugu horeysa in la gaaray, isla markaana uu kala hadley iscasilaadiisa Gudoomiyaha gudiga sare ee Al-Jazeera Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani oo ah Amirka dalka Qadar oo isagu sameeyey Tv-ga Al-Jazeera sanadkii 1996-kii.
Siyaabo kala duwan ayaa looga hadley iscasilaada Khanfar waxaana qaarkood ay ku macneeyey dawlada Qadar gaar ahaan qoyska reer Boqor oo doonaysa inay toos u maamulaan hawlaha Tv-ga oo inta badan ka dhaliyey caro wadamada Carabta & kuwa reer Galbeedk, iyadoo dawlada Mareykanka ay ku sigatey inay duqeyso xarumaha Jazeera xiligii uu meesha xun marayey duulaankii Mareykanku ku qabsadey dalka Ciraaq.
Sheekh Axmed agaasimaha guud ee cusub
Tuhunka reer Boqor inay Jazeera maamulanayaan waxaa sii xoojiyey iyadoo loo magacaabay Agaasimaha cusub Sheikh Axmed Biun Jassim Bin Mohamed Al Thani oo isagu ah aqoonyahan bartey Petroleum Engineering wuxuu mudo ka soo shaqeynayey hay’adaha gaaska & saliida ee dalka Qadar, isagoo wax ku soo bartey jaamacadaha Imperial College of Science and Technology and Medicine ee magaalada London, Jaamacada Et Des Moteurs ee dalka Faransiiska & Delf University ee wadanka Holand.
Ninkan ayaa sidoo kale ah Gudoomiyaha kooxda kubada Cagta Al Ahli ee ka dhisan wadanka Qadar.
Arimaha kale ee tuhunka is casilaada Wadah Khanfar ku gadaaman ayaa waxaa ka mid ah kacdoonada ka aloosan wadamada Carabta oo si weyn isha loogu hayo in Telefishinka Al-Jazeera uu kaalin weyn ka qaadatey.
Shabakada wareed ee siraha qufta eelagu magacaabo WikiLeaks waxay heshay xog ka soo baxdey diblumaasiyiinta Mareykanka oo sheegaysa in dawlada Mareykanka ay si weyn uga soo horjeeda hanaanka Tv-ga Jazeera uu u baahinayey dagaalada Ciraaq, iyadoo cadaadis weyn ku saartey arinkasi dawlada Qadar.
Wadah Khanfar oo ah saxafi u dhashay Falastiin wuxuu xilka agaasimaha guud ee Al-Jazeera uga dalacay isagoo ahaa wariye ka soo warami jirey wadaamda Ciraaq, Afgaanistan & Koonfur Afrika waxaana lagu tilmaamay in tan iyo markii uu xilka uu iska casilay haatan uu qabtey uu kaalin weyn ka qaadatey isbadal balaaran oo ku dhacay warbaahinta Carabta oo inta badan aheyd cod sidii ay doonaan u adeegsadaan madaxda wadamada Carbeed.
Barta uu ku leeyahay adeega Internet ee xiriiriyaha bulshada ee on Twitter wuxuu ku sheegay in 8 sano uu ku jirey shaqada hogaaminta Jazeera uu go’aansadey in uu hada ka tago.
Dad badan oo Carbeed oo indhaha ku haya xaalada dalalka Carabta ayaa ku tilmaamay Wadah Khanfar in uu u hayay naxariis dheeraad ah wararka la xiriira Ikhwaanu Muslimiinka gaar ahaan kacdoonada Islaamiga ah sida dalka Liibiya, waxaana la sheegay in xubno caan ah oo Islaamiyiin ah oo ku sugan wadanka Qadar si joogto ah Tv-gu u siin jirey waqti ay ku soo bandhigaan fikradahooda.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey Al-Jazeera inay hoos u dhigtey baahinta wararkii la xiriiray kacdoonkii dalka Baxreyn oo lala mid dhigay kii ka dhacay wadamada Yemen, Masar, Liibiya & Tunisia.
Si kastaba ha ahaatee waxaa si weyn la isku raacay in Wadah Khanfar uu kaalin weyn ka soo qaatey in Tv-ga Al-jazeera uu haatan ka mid noqdo warbaahinta ugu afka dheer caalamka, isla markaana malaayiin qof oo dunida dacaladeeda kala joogta ay si toos ah ugu xiran yihiin.
Sheekh Cusama oo ka hadlaya Telefishinka Al-Jazeera
Dadweynaha Carabta ayaa la sheegay in Al-Jazeera uu u yahay isha kaliya ee xaqiiq wareed ay ka aamin karaan taasi oo lagu ogaaday sahan dhanka saxaafada la xiriira oo la sameeyey sanado kala duwan.
Telefishinka Al-Jazeera ayaa ku soo caan baxay tabinkii wararkii dagaalada Ciraaq & Afgaanistan, iyadoo si toos ah had iyo goor uu soo gudbiyey wararka ururkii Al-Qaacida & Taalibaan waxaana uu soo gudbin jirey wareysiyo & warbixino u khaas ah oo laga soo duubo Hogaamiyeyaasha Al-Qaacida & Taalibaan oo ay ka mid ahaayeen Cusaama Bin Ladin, Mullaha Cumar & Ayman Azawaheri.